ईटहरीका महिलाहरुलाई तीजमा ३ कार्यक्रम, प्रमुख आकर्षण एउटै (फोटो फिचर) - www.dthreeonline.com
ईटहरीका महिलाहरुलाई तीजमा ३ कार्यक्रम, प्रमुख आकर्षण एउटै (फोटो फिचर)
प्रकाशित मिति: सोमबार, भाद्र १६, २०७६ समय: २३:०२:४५
ईटहरी/ हिन्दु नेपाली महिलाहरुको महान चाड हरीतालीका तिज आज देशभर बिशेष गरि महिलाहरुले मनाएका छन् । हिन्दू धार्मिक ग्रन्थ अनुसार राजा हिमालयले आफ्नी छोरी पार्वतीको कन्यादान भगवान विष्णुसँग गरिदिने वचन पार्वतीलाई मन नपरे पछि आफूले मन पराएको वर पाउन जङ्गल गएर शिवजीको तपस्या गर्न थालिन् । पार्वतीले तपस्या गरेको एक सय वर्ष पूरा भइ सक्दा पनि आफूले गरेको तपस्याको फल नपाउँदा एक दिन उनले शिव लिङ्गको स्थापना गरी पानी पनि नपिई निराहार व्रत बसिन् । यसरी पार्वतीको कठोर व्रतको कारण शिवजी प्रकट भई ‘चिताएको कुरा पुगोस्’ भनी आशिर्वाद दिए पछि शिव पार्वतीको विवाह हुन पुग्यो । त्यो दिन भाद्र शुक्ल तृतीयाको दिन थियो । सोही तिथीदेखि हिन्दू नारीहरूले यस दिनलाई उत्सवका रूपमा मनाउन थाले र यो तीजको रूपमा मनाउने चलन पौराणिक कालदेखि चल्दै आएको मानिन्छ ।
त्यस्तै आज इटहरीको चोकमा पनि तिजको रमझम व्यापक देखिएको थियो । इटहरी चोक नजिकै ३ ठाउँमा तिजको कार्यक्रम थियो । एउटा कार्यक्रम गोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर छेउमा इटहरी लेडिज जेसिजले गरेको थियो । त्यस्तै सेन्टर प्लाजा अगाडि सैन्दर्य कला व्यवसायी सघं र पेस्को मेकअप स्टुडियोको संयुक्त आयोजनामा भएको थियो । त्यस्तै इटहरी उपमहानगरपालीकाको कार्यलय अगाडि अ.ने.म. संघले गरेको थियो । दर्शकहरु पनि कुन कार्यक्रम हेर्ने हो भन्ने अन्योलमा देखिन्थे । दर्शक बाडिएका थिए । एकै चोकमा तिन कार्यक्रम भएकोमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा इटहरीका पत्रकार हिमाल दाहालले लेख्छन् “ठाउँ सानो भएको हो कि मन सानो भएको हो ?” लगभग तिनओटा कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षण भने एउटै थिए । कार्यक्रमा उपस्थीत दर्शकहरु पनि तिन ठाउँमा भएको कार्यक्रम देखेर असन्तुष्टि देखिन्थे ।
त्यस्तै इटहरीका नाम चलेकी गाईका अन्जु गौतम भन्छिन् “हामीले इटहरी चोक आसपास भएको तिन वटै कार्यक्रम भ्यायौँ तर मैले सोचेको त्यो तिन वटा कार्यक्रम तिन जानाले एकै ठाउँमा अग्रनाइज गरेको भए पैसा पनि एक्दम बच्थ्यो र तिन आयोजकको सहकार्य पनि राम्रो देखिन्थ्यो, मान्छेले हेर्दा सोचाई पनि राम्रो हुन्थ्यो भनेर मैले सोचेको हो । म त अझै पनि अग्रनाईजरलाई मिलेर काम गनुर्स छुटेर काम केहि छैन् । सबै मिलेर एकै ठाउँमा काम गर्दा एकदम राम्रो हुन्छ भोलीको दिनमा भन्छु ।” भन्दै उनले मिलेर काम गर्न सल्लाह दिईन र एकै ठाउँमा कार्यक्रम नभएकोमा गुनोसो पोखिन् ।
अर्की इटहरीकी परिचित गायिका गङा गौतम भन्छिन् “तिज एकदमै भव्य र सव्य भयो तर इटहरीमा चाहि एकै ठाउँमा तिनवटा प्रोगाम थियो, मैले तिनवटै भ्याए त्यो प्रोगाम सबै मिलेर एकै ठाउँमा गरेको भए अझ राम्रो देखिन्थ्यो । हाम्रो दर्शक बाडिए । एकै ठाउँमा भएको भए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो । मजाले समय दिन सकिन्थ्यो । हामी गित गाउदै कुदनु पर्ने भयो, भ्याई नभ्याई हामीलाई धावा धावा भयो । अब प्रस्तुति दिने क्रममा हतारले गर्दा राम्रो प्रस्तुति दिन सकिएन एकै ठाउँमा भएको भए सबैको मन रहन्थ्यो । उनिहरुले कलाकारलाई खुशि पार्थ्यो हामी दर्शकलाई खुशि पाथ्यौँ । हामीलाई चै समय दिन धौ धौ परेको थियो” । भन्दै आयोजक संग गुनासो पोखिन् र एकै ठाउँमा हुनुपर्थ्यो कार्यक्रम भन्नेमा जोड दिइन् । यसरी एकै ठाउँमा तिन कार्यक्रम हुदा इटहरी एक जुट नभएको हो की भन्ने प्रश्न पनि उठछ । बाहिरी मान्छेले हेर्ने दिष्टिकोणमा पनि फरक पर्नसक्छ । आज भएको कार्यक्रम के एकै ठाउँ गर्न सकिन्न थियो त ? यो बिषयमा पनि सरोकारवालाहरु ध्यान दिने कि ?